Ogaden News Agency (ONA) – Dad shacab ah oo lagu laayay tulada Uubataale/Gobolka Wardheer
Dad shacab ah oo lagu laayay tulada Uubataale/Gobolka Wardheer
Wararka aan ka helayno magalada Wardheer ayaa sheegaya in maxaysatada Cabdi iley ee hawaarin ay xasuug (Wareysiyo laga soo duubay qaxootiga Dadaab hoos ka fiiri) ka gaysteen tuulada Uubataale oo 7 km ka xigta magaalada Wardheer dhanka galbeedka.
Dhacdadan layaabka leh ayaa timid kadib markii ay soo galeen tuulada koox hubaysan oo ka yimid magaalada Wardheer kuwaas oo bilaabay in ay boobaan dadkii isla mar ahanataana ay rasaas ku furaan dadkii shacabka ahaa. Ma cada tirada dadka wax ku noqday, dhanka xidhiidhka dartii ayadoo uusan jirin telfoon goobta ay wax ka dheceen isla mar ahaantaana gaadiidku ka mamnuucan yahay.
Waxaa magaalada jijiga loola cararay gabadh rasaas badan haleeshay laguna magacaabo Ardo jeel iyo wiil naloogu sheegay ina Macalin Cabdiqaadir oo isna dhawac ah. Majirto wax jawaab ah oo laga bixiyay xasuuqan loo gaystay dadka shacabka ah ee aan wax galabsan. Mana ahan markii ugu horaysay ee dhacdadan oo kale ay kadhacdo isla tuuladaas. Sanadkii aan soo dhafnay iyo kii ka horeeyayba waxaa sidaas oo kale loogu dilay dad shacab ah oo aan laga hadlinin waxaana kamid ahaa Alaha u naxariistee Cabdiqadir Cabdi waaxid oo lagu dilay tuulada Ubataale.
Guud ahaan wadanka ogaadeniya waxa ka socda xasuuq aan loo kala meel dayaynin. Waxay ahayd bishii MAY markii boqolaalka ruux lagu dilay hawkgaladii ay fulinayeen jabhada Tigreega iyo Hawarinta oo wada socda. Taariikhda markay ahayd 14/05/2011 ayay maxaysatadaa xushay toga Fafaneed halkaas oo lagu dilay dad kabadan 40 ruux laguna waayay tiro dad ah.
Xasuuqa iyo gaboodfalka lagu hayo dadka shacabka ah ayaa ah mid ay isku dayayso xukumada Addis Ababa in ay kaga weeciso rabitaanka dadweynaha Ogadenya ee doonaya in ugu noolaado dalkiisa si xor ah una madax banaanaado aayahiisa.
Wareysigan waxaa soo qaaday Saxafi Rooble Garaad.